မြောက်ဒါကိုတာ WIC | JPMA, Inc
အမျိုးသမီးများ၊ မွေးကင်းစနှင့်ကလေးများ (WIC)
North Dakota WIC သည်သင်၏မိသားစုကိုပျော်ရွှင်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းစွာမြင်လိုသည်။ သင့်အားကိုယ် ၀ န်မှမွေးဖွားချိန်အထိနှင့်သင့်ကလေးကိုသင့်ကလေး၏ ၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိကျွန်ုပ်တို့ကကူညီသည်
Q: ငါသည်ငါ့ WIC အစားအစာများအပေါငျးတို့သရရှိရန်ရှိပါသလား?
A: မဟုတ်ပါ၊ သင် ၀ ယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်သင်မှသတ်မှတ်ထားသော WIC အစားအစာများကို ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်ချိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
A: အချို့သောအစားအစာများအတွက်အစားထိုးအနည်းငယ်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်သင်၏အစားအစာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောင်းလဲရန်သင်၏ WIC ဒေသခံအေဂျင်စီနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ စတိုးဆိုင်တွင်အစားထိုးခြင်းမပြုရ။
Q: ငါသည်ငါ့အိမ်သူအိမ်သားတခြားအဖွဲ့ဝင်တွေငါ့ WIC အစားအစာများသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ကလေး၏ WIC အစားအစာများကိုအစာကျွေးလို့ရမလား?
A: WIC အစားအစာများကိုစစ်ဆေးမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောလူအတွက်သာရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်၏အိမ်တွင် WIC စစ်ဆေးမှုများကိုလက်ခံရရှိသူများသည် WIC မှထောက်ပံ့သောအစားအစာအချို့ကိုမစားပါကစတိုးဆိုင်သို့မသွားပါနှင့်သို့မဟုတ်ဒေသန္တရအေဂျင်စီ ၀ န်ထမ်းများအားသင်၏ချက်လက်မှတ်မှဖယ်ခွာပါ။
A: သင်၏ WIC ဒေသခံအေဂျင်စီကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်အာဟာရပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံပြီးသင်ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မည်။
A: အမှတ်အဲဒီလဝယ်ယူမရသည့်အခြေအနေမဆို WIC အစားအသောက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလာမယ့်တစ်လကျော်ယူမသွားပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး WIC ရုံးကိုရှာပါ
ယင်းကိုသုံးပါ "တစ်ဦး WIC ရုံးကိုရှာပါWICShopper အက်ပလီကေးရှင်းရှိ“ ခလုတ်။ သင်၏ဆေးခန်းသို့လမ်းညွှန်များကိုထို app မှတိုက်ရိုက်ခေါ်ယူနိုင်သည်။
ရှာရန်North Dakota WIC အာဏာပိုင်လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်"နိမိတ်။
သင်၏ WIC စစ်ဆေးမှုများနှင့် WIC ID ဖိုင်တွဲကိုသင့်အားစတိုးဆိုင်သို့ယူလာပါ။
ထုတ်ကုန်များကို၎င်းတို့ကို North Dakota WIC နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသေချာစေရန် WICShopper အက်ပ်တွင်စစ်ဆေးပါ။ ထုတ်ကုန်များကိုမ ၀ ယ်ခင်သင်၏ချက်လက်မှတ်တွင်အမှန်တကယ်ထုတ်ထားသောအစားအစာများရှိသည်ကိုစစ်ဆေးရန်သတိရပါ။
သင်ဝယ်နိုင်သည့် WIC အစားအစာများကိုကြည့်ရှုရန် WICShopper (သို့မဟုတ်သင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသော version) တွင်သင်၏ North Dakota WIC အတည်ပြုထားသောအစားအစာစာရင်း (AFL) ကိုသုံးပါ။
Allowed - ဤပစ္စည်းသည် WIC အတည်ပြုထားပါသည်။ သိထားသင့်သည့်အချက်တစ်ခုမှာသင်သည်ပစ္စည်းတစ်ခုခွင့်ပြုသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကို WIC နှင့်မဝယ်နိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နှစ်သားလေးသည်နို့တစ်လုံးရရှိသည်။ သင့်မိသားစုတွင်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမရှိပါကနို့တစ်လုံးလုံးသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သင်မှတ်ပုံတင်တွင်နို့တစ်လုံးလုံးမဝယ်နိုင်ပါ။ WIC အကျိုးခံစားခွင့်များသည် WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ချိတ်ဆက်သည်အထိဤ“ ခွင့်ပြုထားသော” သတင်းစကားသည်သင်၏မိသားစုအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
မ WIC ကို item - ဆိုလိုသည်မှာ North Dakota WIC သည်ဤပစ္စည်းအားအတည်မပြုနိုင်ပါကိုဆိုလိုသည်။ အကယ်၍ WIC အစားအစာသက်သာခွင့်များဖြင့်ဤအစားအစာကိုသင် ၀ ယ်ယူသင့်သည်ဟုသင်ယူဆပါက“ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!ဒီ app ထဲမှာ "ခလုတ်ကို။
သိရှိနိုင်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး - ဆိုလိုသည်မှာဤပစ္စည်းသည် WIC အရည်အချင်းပြည့်မီမှုရှိမရှိကိုအက်ပလီကေးရှင်းကမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ။ စတိုး၌ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သည့်စတိုးဆိုင်တွင်ဝိုင်ဖိုင်ချိတ်ဆက်မှုကိုရှာပါ။
English North Dakota WIC အစားအစာစာရင်း
Lista က de Comida española
ဒါကအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ညီမျှအခွင့်အလမ်းပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ (WIC ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသောကြေညာချက်အတွက် link ကိုနှိပ်ပါ)